प्राकृतिक विधिबाट कसरी निरोगी हुने ? - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
अपवाद वाहेक हामी स्वस्थ शरीर लिएर जन्मन्छौं । जन्मदा हाम्रो शरीर एवं शरीरका अंगहरुले सही कार्यसंचालन गरिरहेको हुन्छ । सबै कुरा सन्तुलित र सही हुन्छ ।
तर, जब–जब हुर्कदै जान्छौं, हाम्रो स्वास्थ्य उस्तै रहँदैन । पेट खराब हुन थाल्छ । कलेजो, मुटु, फोक्सोको कार्य क्षमता घट्न थाल्छ । उमेर ढल्कदै गएपछि स्वभाविक रुपमा शरीरका अंगहरु पनि कमजोर र शिथिल हुन्छ । तर, बाल्यकालबाट उमेरको सिंढी चढ्न थालेपछि हाम्रो शरीर रोगी हुन थाल्छ । किशोर, युवा अवस्थामा समेत हामी अनेक रोगसँग जुध्न थाल्छौं । किन ?
किनभने जति–जति हुर्कदै जान्छौं, हामी आफ्नो प्राकृतिक जीवनशैलीबाट विमुख हुन थाल्छौं । हामीलाई आफ्नो शरीर वा स्वस्थ्य अनुसार भन्दा पनि मन र रहर अनुसार चल्न थाल्छौं । शरीरको प्राकृतिक प्रणाली भंग गरिदिन्छौं । यही कारण हामीमाथि रोग हावी हुन थाल्छ ।
रोग लाग्नु भनेको के हो ? कसरी हामी रोगको शिकार बन्छौं ?
शरीरमा जब कुनैपनि किसिमका विकारहरु सञ्चय हुन थाल्छ, तब हाम्रो शरीरका अंगहरुले सही कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन । शरीरको कार्य प्रणाली बिग्रन्छ । त्यही अवस्थालाई हामी रोग लागेका भन्छौं । यस्तो किन हुन्छ ?
जब हामी खराब खानपान गर्छौं, खराब जीवनशैली अपनाउँछौं, तब शरीर विकारयुक्त बन्छ । त्यस्ता विकार जति–जति शरीरमा सञ्चय हुन्छ, उत्तिनै हामी रोगी हुन्छौं । शरीरको सही शुद्धिकरण हुँदैन र रोगले डेरा जमाउँछ ।
यसरी शरीरभित्र विकार सञ्चय भएपछि वा रोग लागेपछि हामी त्यसको उपचारको खोजीमा दौडन्छौं । औषधि उपचार, शल्यक्रिया जस्ता विधीहरु अपनाउँछौं । यसले हामीलाई रोगबाट मुक्त हुन सघाउँछ । तर, रोग लागेर उपचार खोज्नुभन्दा रोगमुक्त जीवन बाँच्नु उचित हो ।
रोगमुक्त जीवन कसरी बाँच्ने त ?
यसका लागि एउटै तरिका हो, प्राकृतिक जीवनशैली । प्राकृतिक ढंगको जीवनयापन नै सर्वोत्तम मानिन्छ ।
हाम्रो शरीरभित्र यस्तो प्रणाली हुन्छ, जसले शरीरलाई रोगहरुबाट मुक्त गरेर स्वस्थ राख्ने हरक्षण प्रयास गरिरहेको हुन्छ । सोही प्रणाली अनुसार जीवनशैली, खानपान र सोंच चिन्तन अपनाएर प्राकृतिक रुपमै निरोगी बन्न सकिन्छ ।
जस्तो कि, सही समयमा सुत्ने । सही समयमा उठ्ने । स्वास्थ्य जीवनका लागि सात–आठ घण्टाको गहिरो निद्रा अनिवार्य मानिएको छ । राम्ररी निदाउनु पनि आफैमा एक स्वस्थ्य जीवनको सूचक हो । त्यसैगरी सही समयमा खानपान गर्नु । एउटा सन्तुलित तालिका अनुसार खानेकुरा सेवन गर्नु । शरीरलाई आवश्यक र उचित खानेकुरा मात्र सेवन गर्नु । सक्रिय दिनचर्या विताउनु । व्यायाम, योग, ध्यान आदिलाई आफ्नो दैनिकीको हिस्सा बनाउनु । सधै सकारात्मक र खुसी रहने प्रयास गर्नु । प्रकृतिसँग एकाकार हुने अभ्यास गर्नु ।
सही र सन्तुलित जीवनशैली अपनाउनु नै रोगमुक्त हुनु हो । गहिरो निद्रा लिनु, सुपाच्य खानेकुरा खानु, उचित समयमा मलत्याग गर्नु, सरसफाई गर्नु आफैमा निरोगी हुने सूत्र हुन् ।
शरीर पञ्चतत्वले निर्माण भएको छ । पञ्चतत्व भनेको अग्नी, आकास, जल, वायु र पृथ्वी । प्रकृति पनि पञ्चतत्वले निर्माण भएको छ । प्रकृति र शरीर आपसमा एकाकार छन् । त्यसैले शरीरलाई रोगमुक्त राख्ने बुटी पनि प्रकृतिमै छ ।